Qiimo dhimis badan oo firfircoon iyo markan Tado waxaad ka heli kartaa 35% dhimis | Waxaan ka socdaa mac
Shirkada caanka ah ee Tado ayaa hada shaacisay qiimo dhimista dhamaadka xilli ciyaareedka ee alaabooyinka qaar. Tado waxay ku jirtaa buuggeeda wax soo saarka noocyo badan oo xulashooyin ah aqbal gurigayaga, xafiiskayaga, iwm adoo u maraya HomeKit.
Qalabka bilowga ayaa badanaa ugu fiican kuwa sida saxda ah uga bilaabaya tan otomaatiga guriga HomeKit sidaa darteedna waa wakhti fiican in la helo alaabadaas ku habboon baahiyaheena, sidoo kale qiimo dhimis ku filan ilaa 35%.
Meel fog ka xakamee HVAC-ga gurigaaga iyo Tado
Waa taxane alaab ah oo noo oggolaanaya inaan xakameyno dhammaan kuleylka guriga, xafiiska ama qol kasta oo leh xiriir internet. Xaaladdan oo kale, qaybta Tado ee ay ku bixiyaan qiimo dhimista ayaa kaliya ah oo ku jira boggiisa, ha ka raadin dalabyadan dibedda.
Tado sidoo kale waxay leedahay qayb aad ka heli karto alaabooyinka dib loo cusboonaysiiyay, laakiin kiiskan waa kuleyliyaha cusub iyo madaxyada heerkulbeegyada, waxa kaliya ee waxaa gabaabsi ah alaabtii hadhay. Tani waxay sidoo kale macnaheedu noqon kartaa inay durbaba diyaarinayaan alaabooyin qaboojiye oo cusub laakiin si kasta oo ay tahay kuwan aan ka helno shabakadda ayaa gebi ahaanba waxtar leh in la xakameeyo qaboojinta gurigeenna.
Dalabyadan waxaa la heli karaa waqti ka waqti iyo ka Tado waxay ka digayaan inay dhamaan doonaan Axada soo socota, Maarso 21, Marka ha sugin wax intaa ka badan oo booqo boggooda internetka si ay u kabaan qalabkaaga ama u helaan xirmo cusub oo Tado ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Qiimo dhimis badan oo firfircoon iyo markan Tado waxaad ka heli kartaa qiimo dhimis dhan 35%
Apple waxay abuurtaa iyadoo lala kaashanayo Robert Redford tartan filim deegaan ah oo loogu talagalay dhalinyarada